Welcome to Aayaha Nolosha » JACAYL DHAQAALE MA DHEERAADO.
JACAYL DHAQAALE MA DHEERAADO.
March 11, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Quruxda illaahay siiyey, haybada iyo hanaanka socodwanaaga, ee ay u dhalatay ayaa cid walba oo aragtaa ay ku dheygagi jirtey, waa la waayey nin arkaa oo aan damac guur ka galin, xataa haddii uusan qorshahaas ku fikiri jirin.
Taasina waxa ay keentay in labaatan sano ayada oo aan gaarin la guursado, ninkii ugu horeeyey ee Shaashka saarey, waxa uu ahaa Khaalid oo ay wiil u dhashay, kaas oo ka bixiyey dhaqaale culus, balse iskuma ay raagin oo waa ay kala tageen.
Garoob da, yar oo raggu aad u daba ordo ayey noqotay, dhabankeeduna ma uusan gabin, ee gabarnimadeedii si ka daran ayaa raga guurdoonka ah ugu hardamayeen, iyadoo qaarkood hanti ka badan tii markii ay gabadha aheed laga bixiyey ay diyaar la ahaayeen.
Guurkii labaad ayey Ilhaan nasiib u heshay mid ka lacag badan kii hore, kaas oo u dhigay aroos aad u weyn oo aan la arag noociisa,laakiin sanad wax ka yar ayey ku kalatageen.
Ilhaan wali damaca guur ee garoobnimadeedu waa mid marba marka ka danbeeya ka sii culus, waxayna guursatay rag badan oo hanti leh, kuwaas oo aakhirkana ay kala tageen, mana jirin mid ay wax u dhashay marka laga reebo kii u horeeyey oo ay hal wiil ka heshay.
Inkastoo ay lacago badn ka heshay guurkii u ekaa baayacmushtarka ee ay galaysay, haddana ma jirin mid ay ku nagaatey, taasna waxaa sabab u ahaa Jacaylka oo meesha ka maqnaa iyo guurka oo ahaa mid Maal ku xirnaa, kaas oo aakhirkii burburayey.
Guurka dhabta waxa uu ku fiicanyahay in uu yahay mid salka ku haya kalgacal run ah, oo haysta hogaan Jacayl oo lagu yagleelo Guri Caashaq, oo ku dayran darbi adag oo ka samaysan xaydaab Cishqi oo aan la jabin karin.
Sida runtu tahay guurka lagu raago waa midka ka dhasha Jacaylka ee aan ku imaan arimo dhaqaale.
Macaanka nolosha waa jacaylka ay naftaada raaliga ka tahay, qofka aad mustaqbalka la wadaagina waxaa loo baahanyahay in uu yahay, mid aad isku hubto oo aad naftaada ku aamini karto, ee uusan noqon shaqsi u arka in uu lacag kugu iibsadey.
Qofka aydaan Jacayl dhab ah wadaagin macno malaha la noolaanshihiisu, guurka noocaa ahna waxa uu ku danbeeyaa Fashil.
Ilhaan maanta waa garoob dhowr iyo toban nin ay soo fureen, oo ragga dhana ay isu sheegeen waxa ayna gaartey heer laga cararo, halkii waayada qaar lagu hardami jirey.